Dawladda Kenya oo qaybisay deeqo khuseeya mashaariicda elektaroonigga - Sabahionline.com
Dawladda Kenya oo qaybisay deeqo khuseeya mashaariicda elektaroonigga
Dawladda Kenya ayaa 106 milyan oo shilinka Kenya ah (1,3 milyan) u qaybsiay shirkado ganacsi oo ka shaqeeya tiknoolajiyadda oo ku baahsan dhammaan dalka sifo sare loogu qaado horumarka khuseeya arrimaha elektaroonigga, sidaana waxa Isniintii (7-da May) qoray wargayska Daily Nation ee Kenya. Qodobbo la xiriira
Kibaki oo furay dhismaha warshad laga dhaliyo tamarta dhulka
Baanka Adduunka oo maalgelinaya sofweerka (software) sameeyayaasha Kenya
Kenya oo baaraysa hanti macdaneed si ay u dardar-geliso horumarka
Safaricom oo raadinaysa fikrado wax ku ool ah oo la xidhiidha barnaamijyada moobiilllada
In kabada 30 urur ayaa laga xushay 790 codsi oo loo soo qortay lacagtaas. Ururadan ayaa ka shaqayn doona in ay manaahijta waxbarashada dugsiyada u baddalaan elektaroonik isla markaana ay waaxda caafimaadka u hindisaan una sameeyaan cayaaraha fidiyoowga iyo barnaamijyo kambiyuutar.
“Haatan waxanu ka gudubnay hadalkii dhismaha asaaska, waxanan u gudubnay dhismaha nuxurka, abuuridda siyaasad wanaagsan oo lagu shaqeeyo iyo kobcinta aqoonta ee mihnadda,” ayuu yiri Bitange Ndemo oo ah Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Warfaafinta iyo Isgaarsiinta.
Maaliyadda mashruucan khuseeya elektrooniga ayaa qayb ka ah deeq uu bixiyay Bangiga Adduunka oo dhan 250 milyan oo shilinka Kenya ah ($3 milyan), taasoo loogu tala-galay in lagu dhiiri-galiyo casriyaynta teknoolajiyadda maxalliga ah.